Farxaan Qaroole iyo Cumar Filish oo go’aan culus ka qaatay Banaabaxa mucaaradka | Entertainment and News Site
Home » News » Farxaan Qaroole iyo Cumar Filish oo go’aan culus ka qaatay Banaabaxa mucaaradka
Farxaan Qaroole iyo Cumar Filish oo go’aan culus ka qaatay Banaabaxa mucaaradka
daajis.com:- Duqa Magaaladda Muqdisho oo Fulinaya rabitaanka Madaxweynaha Muddo xileedkiisu dhammaaday ayaa sheegay in Ciddii qabata Bannaanbax loo aqoonsan doono iney kasoo hor jeedaan nabadda qalqalna galinayaa Ammaanka Xamar, wuxuuna yiri ma aqbalayno Bannaanbax.
Waxaa kaloo isaguna fadhiyey goobta shirka, Farxaan Qaroole Taliyaha qeybta guud ee Booliiska Gobolka Banaadir oo warkaas ku raacay Cumar Filish Duqa Muqdisho islamarkaana u hanjabay dadka shacabk ah.
Fiqi oo kamid ah Mucaaradka ayaa ah qabanqaabiyaasha waaweyn ee Bannaanbaxaas kamid ah iyo waliba dhalinyaro hal door ah.
Waxaa dhanka kale xusid mudan in xukuukumadda Soomaaliya ay raali katahay banaabaxan islamarkaana ay gadaal ka riixeyso.
Waxaa sidoo kale xusid mudan in Banaabaxan uu kusoo aadayo xili uu khilaaf u dhaxeeyo Farmaajo iyo Rooble.